သေစားသေစေသောသူများအတွက် POST-CREDITS အဖြစ်မရှုမြင်ပါ - AGE OF ULTRON - ရုပ်ရှင်များ
Joss Whedon ကသေစားသေစေသောသူမအတွက် Post-Credits အဆက်မပြတ်အတည်ပြုသည်။ Age of Ultron; ဂျူလီ Delpy ပြီးတော့ Linda Cardellini ရဲ့ဇာတ်ကောင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
Joss Whedon နှင့် Kevin Feige တို့က Avengers: Age Of Ultron သည် Post-credit sequence မပါ ၀ င်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
အစဉ်အဆက်ပထမ ဦး ဆုံးကတည်းက သံမဏိလူသား ပရိသတ်များအားနစ်ခ်ဖူရီယန်၏အကြို Post- ခရက်ဒစ်အစီအစဉ်တွင်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ရှုပြီး၊ ဘားကိုသတ်မှတ်သည်။ Marvel Cinematic Universe မှရုပ်ရှင်နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင်တိုင်းသည်ကျယ်ပြန့်သောဇာတ်လမ်း၏ကြီးမားသောအပိုင်းအစများသို့ရုပ်ရှင်သွားသူများအတွက်သဲလွန်စပေးမည့်ထိုနေရာကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုခဲ့သည်။ Captain America - ဆောင်းရာသီစစ်သား ), ဖြစ်နိုင်ခြေလူကြမ်းအဖြစ်ကိုအရိပ်အမြွက် ( လက်စားချေသူများ ) နှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်၏လူကြိုက်များဇာတ်ကောင်ပြန်လည်လည်ပတ် ( Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ ) ။ ဒါကလမ်းကြောင်းသစ်နောက်ဆုံးတော့ဒီနှစ်နှင့်အတူ buck မှသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည် Avengers: ခေတ်၏ Ultron ဒါရိုက်တာ Joss Whedon နှင့် Marvel ကြေးဝါ Kevin Feige တို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြေငြာခဲ့သည်။
သူတို့အဆိုအရစူပါဟီးရိုးနောက်ဆက်တွဲ Post- ခရက်ဒစ် sequence ကိုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Whedon သည်ယခုနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော shawarma bit ၏အစွန်းကိုပထမ ဦး ဆုံးအဆုံးတွင်ဖော်ပြထားသည် Avengers အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်အဖြစ် Ultron ၎င်း၏တစ်ခုနှင့်အတူနိဂုံးချုပ်မည်မဟုတ်
ငါတို့ရှိသမျှသည်သီးခြားစီရောက်လာ - ငါတို့လိုက်ချင်ကြဘူး။ ၎င်းသည်ရတနာတစ်ခုနှင့်ထူးဆန်းသောထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့သည် အဲဒီ့တစ်ခု ။ ဒါဟာတူညီတဲ့လမ်းအတွက်သူ့ဟာသူချေးငှားရန်မထင်ခဲ့ဘူး, ငါတို့မှန်ကန်သောခံစားခဲ့ရသောအရာကိုမှစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ချင်တယ်။ နောက်ဆက်တွဲဆက်ခြင်း၏ပထမစည်းမျဉ်းသည်အကောင်းဆုံးအချိန်များကိုယူပြီးအခြားအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားနောက်တဖန် Indiana ပြည်နယ်ဂျုံးစ်သေနတ်လှည့်ကွက်မထားပါနဲ့။ ရုံအခြားတစ်နေရာရာမှာသွားပါ။ တူညီသောအမြင့်ဆုံးကိုထိရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
ဒါဟာအားလုံးမကောင်းတဲ့သတင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုးနှက်မှုကိုပျော့ပြောင်းစေရန်, Feige သည်နောက်ဆုံးမြင်ကွင်းအပြီးတွင်တိုတောင်းသော epilogue အဖြစ်တည်ရှိသည်သော tag ကို၏တည်ရှိမှုကိုရည်ညွှန်းသည်:
tag တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ သို့သော် Post-Post- ခရက်ဒစ်မြင်ကွင်းတစ်ခုမရှိပါ။
အဘယ်အရာကိုအံ့ movie ဘွယ်ရုပ်ရှင်ဂျနီဖာလောရင့်ခဲ့သည်
သေးငယ်တဲ့နိဂုံးချုပ်ပါဝင်သည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ထပ်လောင်း Whedon said:
အဆုံးမှာဘာမှမရှိဘူး။ ထိုအတုထွက်မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေကိုသိစေချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့က ၁၀ မိနစ်လောက်ထိုင်ပြီးမသွားကြနဲ့။aခွေးသား! ငါသူတို့ကိုသတ်လိမ့်မယ်! '
ဆုံးဖြတ်ချက်ကအရေးမကြီးဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်လက်သည်းကိုက်ခြင်းနှင့်ပြည့်နှက်နေသောရုပ်ရှင်တစ်ကားရှိမည်မဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းသည် Avengers-line အသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသသည့် Post-credit အစီအစဉ်တွင်အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခြင်းသည်ယခုအခါတရားဝင်သေဆုံးသွားပြီဟုအကြံပြုထားသည်။ မကြာသေးမီက MCU ပေါ်သို့တက်လာခဲ့သူအသစ်ဝင်ရောက်လာသော Spider-Man သည်အဆုံးအကြွေးများ၌ Captain Marvel ၏ပထမ ဦး ဆုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအသွင်သဏ္aboutာန်အကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ယခု POST- ခရက်ဒစ်အဖြစ်အပျက်များသည်စားပွဲပေါ်မှပြတ်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီဆိုလျှင်ကာရယ်လ်ဒန်ဗာကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တွေ့မြင်ရန်အခွင့်အရေးရှိနိုင် ဦး မည်လော။
မြှားရာသီ2ဇာတ်လမ်းတွဲ 19
mr က x ya ကပေးမယ်
ဆီးနှင်းအဖြူနှင့် huntsman trilogy ပာ
Brooklyn 99 ရာသီ2ဇာတ်လမ်းတွဲ 11
သေပြီရာသီ7သေခြင်းမြင်ကွင်းတစ်ခုလမ်းလျှောက်